Ngokwinkcazo yonyango, iindiza ezinomfutho zitsho ziluncedo kakhulu kwimpilo yabantu. Iijisi zinokuhluka: iziqhamo, iberry, imifuno, kwaye zidibene. Kwizityalo ezinje, nje umlinganiselo omkhulu wezinto ezinobomi ezahlukeneyo. Ngoko ke, ukusetyenziswa kwabo kuyamnandi, kwaye kuncedo kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa ngokuqhelekileyo ijusi, kufuneka udibane nodokotela, njengoko kunokubakho ukuchasene. Cinga ngolu hlobo oluninzi luncedo olusenyongweni.
Izithelo zeebisi eziyiluncedo kwimpilo
Kwijusi ye-apple esanda kufakwa, inombolo enkulu yamavithamini. Kunconywa ukuba uyisebenzise kulabo bahlupheke kwi-acidity ephansi kunye ne-gastritis. Kuhle ukusela kunye ne-anemia, ukusebenza kakubi kwenkqubo yokutya, ukulahleka kwesidlo. Kwakhona, i-apula ijusi isetyenziswa ngokubanzi kwizidlo ezisezantsi ezidliwayo.
I-juice e-fresh fresh icebile kwizondlo. Ijusi enjalo isetyenziswa kakhulu kunyango kwaye, ngokuqinisekileyo, ukukhusela izifo ezininzi. Ngezifo ezahlukahlukeneyo zesibindi, ukungabikho kwe-vitamin, ukungena kwegazi. Ukuba udla i-orange ngokutsha rhoqo, unokunciphisa iimpawu, kwaye ukhusele i-ARVI ne-ARI. Ngaphezu koko, ukuba uyayiphuza le juice kwisisu esingenalutho, ingozi yokuqhawulwa iya kuncipha. Ngezilonda kunye nezifo zamathumbu, awukwazi ukusela. Ngezi zifo, kungcono ukhule ijusi yamanandi ngamanzi.
Iipropati ezizodwa ziyijusi yamagilebhisi. Ishukumisa inkqubo yokuxilisa umzimba. I-grapefruit ehlanjululweyo ijusi inceda ukuphucula ukugaya. Ngokusetyenziswa kwayo rhoqo, unokulahlekelwa ngokukhawuleza loo mapaundi angaphezulu. Ukongezelela, le juice inceda kakhulu ekususeni i-liquid excess from body, kunye ne-slags.
Ijusi yamagilebhisi ehlanjululwa ngokutsha isetyenziswa kakhulu kunyango lwezifo ezahlukahlukeneyo. It has diuretic and expectorant. Ucebile kakhulu kwijusi yamagilebhisi i-fructose kunye ne-glucose, kunye nezinto ezimbiwa ngamaminerali. Iyasetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo eyinkathazo yesifo senhliziyo, inkqubo ye-urinary, iinjongo.
Imifuno enokubaluleka kakhulu yongqungquthela ijusi
Enye yeerusi ezinomdla kakhulu iJusiji ijusi. Iqukethe ubuninzi be-carotene, enceda ekuvuseleleni ingqondo, ukuphucula umbono. Kusebenza kakhulu kwizifo zeentso, inkqubo ye-cardiovascular, isibindi. Ngokuqinisekileyo loo juzi ichaphazela imeko yesikhumba, inceda kakhulu xa ukhulelwa, ngexesha lokukhulelwa. Ukongezelela, ngenxa yoluhlu lweetyu kuwo, i-cobalt inceda i-anemia.
Ijusi enkulu kakhulu. Ijusi enjalo inokuyithintela ukuvutha kunye neenkqubo zokubeka kwisisu. Ijusi yamatamatisi inokuthintela kakhulu izifo zomhlaza. Isetyenziselwa ukutya (i-calori ephantsi). Ijusi elitsha elincinciweyo luncedo kubasetyhini abakhulelweyo.
Ijusi elitsha elitywitshisayo elincinci liyanciphisa i-lymph kunye negazi kakuhle, lichithe i-calcium salts. Ukukhuthaza ukuphucula inkqubo yokutya. Ukongeza, xa isetyenziswe, umngcipheko wokuba nesifo se-asthma, isifo sikashukela, i-varicose veins, i-arthritis, i-hemorrhoids, kunye nokwenziwa kwamatye kuncitshiswa.
I-juice ye-pumpkin ehlanjululwe ngokukhawuleza ilungile njenge-agent ye-choleretic, iboniswa kwizifo zesibindi kunye neentso, inceda umsebenzi weentumbu nezisu.
Ijusi yeklabishi ibaluleke kakhulu kwizifo zesifo se duodenum nesisu. Kule meko, kufuneka idliwe ngokufudumele. Kwakhona, iklabishi yelungileyo izifo zezinsini, i-stomatitis. Ngokusetyenziswa kwale juzi, ukuguqulwa kwiifake ezinamafutha e-carbohydrate kulibazisekile, kwaye ngenxa yoko, luncedo ekunyanyeni.
Iiberry eziwusizo ezisanda kufakwa
Ijusi ye-strawberry e-Freshly fried strawberry iyincedisi yamanxeba anesifo kunye ne-eczema. Xa isetyenziswe, ukujuluka kuncitshiswa. Kwakhona i juice ye-strawberry inceda ekhatyweni kwehudo, ukuvutha. Kukulungele ukuxazulula iingxaki kwi-digestive system.
Ngokwesiko, iJaspberry ijusi isetyenziselwa ukubandayo, kunceda ukunciphisa ubushushu. Ijusi le-Raspberry iqulethe i-pectins, enceda ukususa izinto ezininzi eziyingozi emzimbeni. Ezi zizinto ezifana nezetsimbi ezinzima zetsimbi, i-bile acid, i-cholesterol, i-radionuclides, njl. Ijusi ye-Raspberry isetyenziselwa ukuhlambulula amathumbu, kuba isityebi kwifiber.
Iimvuno zizityebi kwizixhobo ezixhamlayo. Ukuba akukho zichaso, unako ukudibanisa, ekubeni ukuxuba, ukunambitha kunye neempawu ezinobomi ze-juices ezifumanekayo zithenga "umthunzi" omtsha.
Ukutya kunye nempilo: indlela yokutya ngokufanelekileyo?
I-kroti kunye nephayinaphu yepinapple nge-glaze
Amehlo e-Puffy kwintsana
Ioli ye-Castor yokukhula kwe-eyelash
Ukuhleka kwandisa ubomi bomntu
I-Snack evela kumakhowa amakhowe
Stepper Stepper for Weight Loss